Metal Zipper, Inyiloni Zipper, Zipper Plastic, Zipper Sliders
I-Metal Zipper, i-Nylon Zippers, i-Zipper yePlastiki, i-Zippers Long Chain ukudayiswa
I-MH Zippers ixhuma wena kanye nathi. Sisebenzisana nazo zonke izinhlobo zezipper njenge-nylon zipper, resin zipper, metal zipper kanye nezinkulungwane zezakhiwo ezihlukene. Inzuzo yonyaka ingaphezulu kwezigidi ze-$ 10. I-Zipper Magazine itholakala ekubhekiseni amakhasimende.Ungabuye uvakashele iwebhusayithi yethu ye-Zipper www.mh-zipper.com.
A: Indlela evame ukusetshenziswa-Ukuqonda izinga le-Zipper
Ibhande: Idayi yebhande kufanele ibe yilapho ingenawo ibala nobunzima, Ethintwe ngesandla, izwa i-Soft. Ibhande libukeka sengathi lihamba ngokuzungeza futhi libheke phezulu.
Amazinyo: I-suface yamazinyo kufanele ibe bushelelezi. Uma isetshenzisiwe, imali ekhokhiswayo ithambile ngaphandle komsindo.
Isongo: I-brace kufanele ihambe kahle futhi ikhululekile, ifakwe kodwa ngeke ivele.
Hem: I-hem ihambisana nebhande ngeke iphule futhi ivele. Iphini elihlukanisayo leyunithi yokuhlukanisa nokugcinwa kweyunithi yokuhlukanisa: I-Square Bolt ingamkelwa ngokukhululekile.
I-Top Stop: I-stop-top kumele ihlangane nezinyo zokuqala ngezinsimbi zensimbi kanye ne-wilon. Kodwa ibanga angeke libe ngaphezu kwe-lmm futhi kufanele liqinise futhi libukeka lihle.
Isitoreji sokuphela: I-stop bottom kumele ihlangane namazinyo noma ifakwe emkhathini futhi kufanele iqiniseke futhi ibonakale ihle.
B: Amathiphu okukhetha i-Zipper
Izimo ezihlukene ze-zipper zihambisana nezimo ezihlukene, ngakho-ke uma uthenga izinto ezilandelayo kufanele zikhonjiswe kumenzi:
I-1. I-zipper izosetshenziselwa kuphi (njengokugqoka isiqu sakhe, izicathulo, i-jackit, i-raincoat, itende, ama-jeans adinga ukuhlanza kanzima nemikhiqizo yesikhumba nge-acidity ephakeme) noma ezinye izidingo ezikhethekile ezikhethekile.
I-2. izidingo zokuqukethwe noma zipper: akudingeki ukuthi ziqukethe i-AZO noma i-nickel bese udlula umtshina wezinaliti.
C: Ukubekezela okuvumelekile kobude obude
Ngenxa ye-inertie eyabangelwa ijubane lokusebenza komshini ngesikhathi kwenziwa i-manufacfacturing of zipper njengoba kuzokwenza ukuphelela kwamazinyo, kuzovela ukubekezelelana okungavumelekile.
Uma isikhathi eside i-zipper yiyona enkulu okuvunyelwe kuyoba.
Amaphutha ahlinzekwa yi-MH zipper Amaphutha anikezwe ibhizinisi laseJapan ku-NEW Century Fair
Usayizi Ukucaciswa (mm)
I-Base Spec. Ukubekezelelana
Ubude be-Zipper (cm) Ukubekezela okuvunyelwe
Ngezansi kwe-30 ± 5mm
I-30-ngezansi60 ± 10mm
I-60-ngezansi100 ± 15mm
ngenhla100 ± 3%
I-Zipper yokuvala ekupheleni
(Okungahlukaniseki) I-Zipper evulekile
(Ehlukanisiwe) I-End Way Two Open End
I-Zipper (ihlukaniswe) I-Way Way Close-End
I-Zipper O Tape I-Way Way Close-End
I-Zipper X Tape
Izindlela Zokulinganiswa Kwe-Zipper
A = Ubude obujwayelekile be-zipper
I-A1 = Ithempulethi yekhanda eliphezulu
I-A2 = i-back head tape
I-Zipper yokuvala ekupheleni Kusukela ekugcineni kokuphezulu kwesilayidi kuya ku
Iphuzu lesitimela esiphansi.
I-Zipper evulekile Kusukela ekugcineni kokuphezulu kwesilayidi kuya ku
Iphuzu lesigaba evulekile.
I-Two Way Open End Zipper Kusukela ekugcineni kokuphezulu kwesilayidi kuya ku
Iphuzu lesiphetho esingezansi
I-Zipper ene-Double Slider
(Ihlelwe ku-Head-Relation) Kusukela ekugcineni kokuphezulu kwesilayidi kuya ku
Iphuzu lesiphakamiso sesinye isiteji esingezansi.
Isixhumanisi esisezantsi) Kusukela ekugcineni kokuphezulu kwesilayidi kuya ku
Bensimbi Ikhaya Izigaba - Ukutadisha --Zizi - I-Ribbon ne-Tape - Amaphuzu - Izikhala - Izinkinobho --Ukufakazela --Tassel & Fringe / Ukunciphisa - Ukusekela Izinto Zokusebenza - Izigaba & Izesekeli --Umshini Wokuhlola & Izingxenye --Fabric - Abanye Inkampani - Ukubuka kwe-MH - UMH Industrial --- Izindwangu Zomshini --- I-Ribbon & Amathebula WeTape --- Laces Factories - Umlando weMH - Bonisa imibukiso --Imigomo yeGalleries - Ividiyo yevidiyo Xhumana nathi Indawo Yendawo --Feedback Community --Sijoyine